Fahalalahàna miteny · Novambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Novambra, 2010
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Novambra, 2010
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Novambra 2010
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Novambra 2010
Serbia: Polisy Mihaza vondrona Facebook mankahala vehivavy
Eoropa Afovoany & Atsinanana 16 Novambra 2010
Ny Lehiben'ny Fampanoavana Serba, miara miasa amin'ny Ministeran'ny Atitany Serba, dia nanao fanadihadiana mikasika ny vondrona Serba ao amin'ny Facebook "Fahafatesana ho an'ny vehivavy“ ("Smrt ženama"), izay nampiely fahankahalàtrna vehivavy.
Chile: Mpianatra Manao Dia Lavitr'ezaka Maherin'ny Arivo Kilaometatra ho an'ny Fanabeazam-Bahoaka
Amerika Latina 11 Novambra 2010
Mpianatra Siliana telo avy amin'ny Anjerimanontolo no nanomboka Dia lavitr'ezaka tamin'ny 30 Septambra lasa teo. Manao ilay Dia lavitr'ezaka ry zareo ho an'ny Fanabeazana Siliana ary hanàla 1000 km mahery manerana an'i Chili mandrapaha-tongany any Santiago renivohitra. Mandeha am-pilaminana ry zareo ho fanoherana ny fanomezana ny fitantànana ny fanabeazana ao amin'ny firenen-dry zareo ho an'ny tsy miankina.
Rosia: Mihamaro ny mpanao gazety misy midaroka
Eoropa Afovoany & Atsinanana 09 Novambra 2010
Igor Podgorny no mitatitra ny nidarohana an'i Sergey Mikhailov, mpanao gazetin'i Saratov, izay nitranga ny 5 Novambra 2010. Kommersant koa manoratra ny nidarohana an'i Anatoliy Adamchuk mpanao gazety avy ao an-tanànan'i Zhukovskiy (faritra Moskoa) sady mpiaro ny alan'i Khimki . Tamin'ny 7 novambra 2010 moa i Adamchuk no nisy nidaroka.
Danimarka: TV Kiorda Voampanga ho Manohana Mpampihorohoro
Eoropa Andrefana 09 Novambra 2010
Voarohirohy ho manohana terorista (mpampihorohoro), hoy ny mpampanoa lalàna any Danimarka ny Roj TV, Fahitalavitra iray mandeha amin'ny zanabolana miteny amin'ny fiteny kiorda ary miorina any Danimarka. Mety ho foanana ny fahazon-dàlan'ny fahitalavitra rehefa mandeha ny fanadihadiana. Ny mpanao famotorana avy amin'ny fanjakana moa dia milaza fa miray tendro amin'ny...